Andres Iniesta Oo Sheegay in oo ka fikiraayo in oo ka fariisto Ciyaaraha Caalamiga Ah | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Andres Iniesta Oo Sheegay in oo ka fikiraayo in oo ka fariisto Ciyaaraha Caalamiga Ah
Andres Iniesta Oo Sheegay in oo ka fikiraayo in oo ka fariisto Ciyaaraha Caalamiga Ah
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 28-06-16 6:16 AM ANDRES INIESTA ayaa sheegay inuu hada ka fakaraayo mustaqbalkiisa xulka Spain kadib markii uu goob jog u ahaa dalkiisa oo khasaaro 2-0 kala kulmaya Italy.
Ninka ku guuleysyay koobka aduunka iyo koobka qaramada Yurub waxaa uu sheegay iney tahay waqtigii uu ka fakari lahaa inuu usii ciyaari karo Spain kadib musiibadii xalay ku qabsatay Paris.
“Waxan islee yahay waa xiligii ugu macquulsanaa oo aan ka fakari lahaa inaan baxo ayuu yiri Iniesta.
“Waxaan lumiyay hadaladii ,waxba ma jiraan oo aan ka aheyn inaan ka fakaraayo mustaqbalkeyga xulka ayuu yiri 34 jirkaan.
Iniesta ayaa loo magacaabay xidigii ugu fiicnaa Euro 2012 waxaana uu fure u ahaa xulka Spain sanadihii dambe oo dhan.
Hadalkiisa ayaa imaanaya iyado shalay ninka ay isku kooxdda yihiin ee Lionel Messi uu ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha heerka caalami ee xulka Argentina kaas oo ka xumaaday qasaaradii dalkiisa kasoo gaartay Chile.